akanjo ba vita amin'ny plastika
akanjo azo anaovana orana PE
Po orana poncho
Palitao orana PE
akanjo orana PVC azo ovaina
PVC orana poncoh
Akanjo mando amin'ny PVC
PE poncho amin'ny baolina
akanjo ba vita pirinty
Ahoana no hividianana palitao
Ahoana no hividianana palitao 1. lamba lamba mazàna dia misy karazana akanjon'orana 4, samy manana ny tombony sy ny fatiantoka ananany, izay azo vidiana arakaraka ny tena toetrany. Tandremo mba hanavahana na lamba fanodinana ny lamba orana. Ny fitaovana namboarina dia miavaka ...
Fomba fikojakojana ny palitao
Fomba fikojakojana ny akanjo fandroana 1. Fitafy lamba fipetrahana raha toa ka palitao vita amin'ny kodiarana ny palanao dia tokony apetrakao amin'ny toerana mangatsiatsiaka sy mifofofofo avy hatrany ny akanjo ampiasaina aorian'ny fampiasana azy, ary ataovy maina ny akanjo mando. Raha misy loto eo amin'ny palitaonao dia azonao atao ny mametraka ny palitaonao eo ambony latabatra fisosana ary manosotra moramora amin'ny ...
Inona no tokony hoheverinao tsara rehefa mividy akanjo mandatena ho an'ny ankizy?
Isika olon-dehibe dia mitondra elo foana rehefa mandeha. Ny elo dia tsy afaka alokaloka fotsiny, fa koa misoroka ny orana. Mora entina dia iray amin'ireo entana ilaina amin'ny diantsika, saingy indraindray tsy dia mety loatra ho an'ny ankizy ny mitazona elo. Ilaina ny fanaovana palitao ho an'ny ankizy ny ankizy ...
Miezaka izahay hanome ny mpanjifa vokatra tsara. Mangataka fampahalalana, santionany sy fika, hifandray aminay!